Line mere $ 270 nde na -ere akwụkwọ mmado | Androidsis
Anyị ekwuworị okwu n'ọtụtụ oge nnukwu ihe isi ike nke ọtụtụ ndị mmepe na -agabiga site na ndị ọzọ amaghi ka esi eme ego ngwa ahụ nke nwere ọtụtụ nde ndị ọrụ mana nke anyị na -ahụ ka ọ na -akụ afọ n'ala mgbe ha rere ya ndị ọzọ ma ọ bụ kwụsị imelite ya nke ọma. Gugul agaala ọrụ iji nyere ndị ọzọ ndị a aka na ọbụna nye ha na ha nwere ike irite pasent dị elu na ụgwọ ndenye aha ahụ dịka anyị siri mata n'izu gara aga. Ọ dị oke mkpa na onye nrụpụta nwere mmetụta na mgbe nnukwu ọrụ gachara, ọ maara na ya nwere ike nweta uru.
Otu n'ime echiche ndị ahụ iji tinye ego na ngwa esitela n'ọtụtụ akụkụ, mana akwụkwọ mmado bụ otu n'ime ihe kacha mma, na ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị maara na Line, ngwa ozi ịntanetị ịntanetị nke Japan, enweela ike nweta nde dollar 20 kwa ọnwa site na ire ngwugwu ndị ahụ. Anyị na-ekwu maka akwụkwọ mmado nke a na-erekarị site na 1 ruo dollar abụọ maka otu 2 ruo 12 na nke ewepụtara dị ka nnukwu nhọrọ nke ndị nrụpụta nke atọ kwesịrị iburu n'uche ka ha bịa soro ha tinye ha na ngwa ha.
1 Akwụkwọ mmado na ahịrị na 2015 ahụ
2 Ma ọ bụghị naanị akwụkwọ mmado
Akwụkwọ mmado na ahịrị na 2015 ahụ
Ọ bụghị na Line bụ onye bidoro ụdị akwụkwọ mmado a, mana na ha bụ akụkụ nke imirikiti ngwa metụtara ozi ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta. Ewezuga ihe onyonyo ọ na -enye, akwụkwọ mmado a enweela ike iwepụta $ 271 n'ime ego ha nwetara na 2015. Nke bụ ọnụ ọgụgụ dị pasent 38 karịa nke e nwetara n'afọ gara aga.
Anyị na -ekwu maka ọnụ ọgụgụ ahụ okpukpu abụọ nke nde dollar iri na ụlọ ọrụ ahụ na -enweta kwa ọnwa site na ire akwụkwọ mmado na 2013 yana naanị ya na -ewe otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ngụkọta ahịa. Ọ bụ ihe dị ezigbo mkpa n'ihi ndabere dị mkpa na Japan maka ihe dịka pasentị iri itoolu nke ego ọ na -akpata yana ebe a na -anabatakwa akwụkwọ mmado na mpụga obodo yana n'etiti ndị ọrụ nkịtị.
Ọnụ ọgụgụ ọzọ nke Line nyere bụ maka izipu akwụkwọ mmado na Nkezi nde 389, akwụ ụgwọ na n'efu, kwa ụbọchị, nke bụ n'onwe ya ihe dị ka pasentị 9 nke ọnụọgụ ozi ezigara na ọrụ kwa ụbọchị.
Ma ọ bụghị naanị akwụkwọ mmado
Ụzọ ọzọ ego na -esi enweta ego bụ site n'ịzụ ahịa na inye ikikere maka ndị kacha ewu ewu. 18,8 nde dollars n’ahịa site n'ụdị ngwaahịa a na -amụba nke nke 2014. Njirimara dị ka Brown, ndị na -ebu oke ngosipụta, ma ọ bụ Ọnwa jisiri ike mee ka ngwa nkata si na obere ihuenyo ama gaa na ihe ngosi telivishọn na Japan nke mere na ọ gafere karịa oke ala ụwa niile.
Line bụkwa ọrụ maka ibupute ụdị ngwaahịa azụmaahịa dị iche iche nke anyị nwere ike ịhụ akpa, akwa, bebi na ọbụna ihe mmado anụ ahụ nke anyị nwere ike tinye n'ọnụ ụzọ friji. Ma ọ bụ na n'etiti akwụkwọ mmado na ngwa ahịa, naanị ha na -ahụ maka faịlụ ụzọ n'ụzọ atọ nke ego ha nwetara na ụlọ ọrụ a nwere.
Ihe ọ na -egosi, n'ikpeazụ, bụ nke ahụ Enweghị ike ịwepu akụkụ na -anọghị n'ịntanetị nke azụmahịa dijitalụ na -enye onwe ya nri mgbe ọ maara ka esi akụ igodo ziri ezi. N’ụzọ ezi uche dị na ya, ndị nrụpụta ndị ọzọ niile enweghị ohere ịgbanye nnukwu ego, mana ha maara ka esi ere ngwaahịa ụfọdụ na nọmba, dị ka akwụkwọ mmado ahụ, ma ọ bụ chee ụzọ ụfọdụ iji hazie isiokwu nke keyboard ma ọ bụ mepụta. mascot maka ngwa kachasị amasị nke ọtụtụ ndị ọrụ, ị nwere ike ịchọta ezigbo ebe m ga -etinye ego na ngwaahịa anụ ahụ ndị ọzọ na -emepe ọnụ ụzọ na, n'ikpeazụ, nnukwu uru.
Un ezigbo ezigbo ihe nlele nke nwere ahịrị nwere akwụkwọ mmado ya na nke Snapchat sochiri, Facebook ozi na ọtụtụ ndị ọzọ na -enye ihe mmetụta mmụọ na ọchị ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ahịa akwụkwọ mmado na-enye ọnya $ 270 n'ime otu afọ
Lewis onye isi dijo
Kedu ka ahịa a si bụrụ ihe ịtụnanya, agaghị m eche na ọ bụ nnukwu.
Zaghachi Lewis Dean
Etu esi lelee egwuregwu na Spain na-ebi na gam akporo gị yana Euro 2016 niile